बिग्रेका छोरा सुधार्ने जिम्मा बुहारीलाई कहिले सम्म ? – Sandesh Press
हालैको एकदिन तराईको उखुम गर्मीले छ’टपटाउँदै बार्दलीमा बसेर हावाको प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ। हातमा बिजय कुमारको पछिल्लो पुस्तकसम्बन्धहरु थियो। आँखा पुस्तकका पंक्तिहरुमा अडिन खोजे पनि कान घरभित्रको गन्थन मन्थनतिर अलमलियो।
आमा र अन्टीहरुको गफगाफ चल्दै थियो। टोलको समूह बैठक पनि भएकाले महिला जमघटको दिन परेको। त्यस्ता भेलाहरुमा मलाई खासै चासो लाग्दैन।त्यस्ता अवसरमा अक्सर गफ खुब चल्छ जुन हाम्रो घरमा रुचिको विषय कहिल्यै बनेन। तर बैठकको निहुँ भएकाले त्यस्ता गफगाफलाई रोक्ने कुरा पनि भएन। नचाहेरै कानमा परेका गन्थन मन्थनले मेरो ध्यान खिच्दै लग्यो। क्रमशः भित्रबाट आइरहेका अनेक प्रसंगहरुप्रति दिमाग चनाखो हुँदै गयो।
टोल समूहमा पेशाले महिला अधिकारकर्मी एकजना पढालेखा अन्टी हुनुहुन्छ। उहाँसँग मेरो मतभे’द भइरहन्छ। टोलसमाजका घर-घरमा के भइरहेको छ, अधिकांश जानकारी उहाँलाई हुन्छ।
त्यसरी छरछिमेकीको विषयमा चासो राख्नु निकटताको हिसाबले राम्रै होला। तर सबैका व्यक्तिगत मामिलामा समेत चासो राख्नु
कति जायज होला? ती अन्टीको व्यवहारले ममा बारम्बार उठिरहने यो प्रश्न उहाँ स्वयमलाई भने सोधेको छैन।
त्यस दिनको बैठकमा पनि उहाँ कसैलाई सल्लाह दिँदै हुनुहुन्थ्यो- ‘आ दिदी, तपाईं पनि छोरो बि’ग्रियो भनेर कति पि’र गर्नहुन्छ? खुरुक्क एउटा केटी खोजेर बिहे गर्दिनुस् न, सुध्रिहाल्छ नि।’कुरैकुरामा यो संवाद कानमा परेपछि भने मेरो जासुसी दिमाग उद्देश्यपूर्वक नै त्यही बैठकमा केन्द्रित भयो। सामुन्ने बसेर सुन्ने र सुनाउनेहरुका लागि सामान्य गन्थनकै विषय थियो। तर अलि परबाट सुन्ने साक्षी बनेको मलाई भने त्यो मामिला निकै ग’म्भीर लाग्यो।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
Nextअस्पताल जलिरहँदा पनि डाक्टरहरुले बिरामीको मुटुको अपरेशन गर्न छाडेनन्